Mahazoa asa: Tenenin'i Danemark ireo mpifindra monina mba hiasa ho an'ny tombontsoa ara-tsosialy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Danemaka » Mahazoa asa: Tenenin'i Danemark ireo mpifindra monina mba hiasa ho an'ny tombontsoa ara-tsosialy
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Kolontsaina • Vaovao Mafana Danemaka • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nilaza ny governemanta Danemark fa vehivavy amin'ny mpifindra monina enina amin'ny 10 avy any Torkia, Afrika Avaratra ary Moyen Orient no tsy miasa.
Ny mpifindra monina dia takiana amin'ny asa mba hahazoany tombontsoa any Danemark.
Ny lalàna vaovao dia hanampy ireo mpifindra monina hiditra ao amin'ny fiarahamonina danoà.
Vehivavy mpifindra monina enina amin'ny folo tsy 'tandrefana' any Danemark no tsy miasa.
Ny mpifindra-monina any Danemark dia takiana hiasa farafahakeliny 37 ora isan-kerinandro mba hahafenoany fepetra amin'ny tombontsoa ara-tsosialy navoakan'ny governemanta.
Ny praiminisitra danoà Mette Frederiksen
Ireo fameperana vaovao dia hapetraka amin'ireo izay nahazo tombony fanampiana avy amin'ny governemanta Danoa nandritra ny telo ka hatramin'ny efa-taona, saingy tsy nahavita fahaizana manokana amin'ny fiteny danoà.
"Nandritra ny taona maro izay dia nanao fanaratsiana olona maro izahay tamin'ny tsy nitakiana na inona na inona tamin'izy ireo," hoy ny PM, izay nanampy fa ireo fitsipika mifantoka manokana amin'ireo vehivavy mpifindra monina mivelona amin'ny tombontsoa, ​​izay tsy miasa ary avy amin'ny fiaviana 'tsy tandrefana'.
"Olana amin'ny ankapobeny raha manana toekarena matanjaka toy izany isika, izay angatahan'ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny asa, avy eo manana vondrona marobe izahay, indrindra ireo vehivavy manana fiaviana tsy tandrefana, izay tsy ao anatin'ny tsenan'ny asa," hoy i Frederiksen.
Danemark manana ny iray amin'ireo fijoroana henjana indrindra amin'ny fifindra-monina ao anatin'ny Vondrona Eoropeana (EU).
Tamin'ny volana Jona, nandany lalàna tamin'ny alàlan'ny latsa-bato 70-24 izy, namela azy ireo handroaka ireo mitady fialokalofana ary handamina fangatahana raha any ivelan'ny firenena izy ireo.
Ny fiaramanidina Belavia miaraka amin'ny motera tsy mahomby dia manao vonjy maika ...
Fitsaboana ara-pahasalamana sy Chef Bobby Chinn tsy misy sisin-tany ...